Yrkes- och studieförberedande modul - Arbetsförmedlingen
/ Yrkes- och studieförberedande modul
Yrkes- och studieförberedande modul
Tusaalaha u sii diyaarinta xirfada iyo waxbarashada waa koorso hagid ah kuna siinaysa taageerada inaad hesho xirfad aad doonaysid inaad bilowdo inaad barato. Ama taageerada inaad hesho xirfad aad isla markiiba shaqo ku raadsan karto.
Inta ay socoto koorsada hagida waxaad baranaysaa:
sida ay tahay in looga shaqeeyo Iswiidhan,
sida suuqa shaqada ee Iswiidhan u shaqeeyo,
muhiimada waxbarasho si loo helo shaqo,
wixi ku saabsan qaababka kala duwan ee waxbarasho,
sida aad isu masruufayso wakhtiga waxbarashadu socoto,
wixi ku saabsan xirfadaha kala duwan ee u baahan shaqaale.
Waxaa kale oo ku jiri kara booqasho shaqo ama tababar goob shaqo si aad adigu u go’aansatid haddii xirfadani kugu haboon tahay adiga. Waxaa xitaa jirta fursada ah in la helo aqoonta aasaasiga ee kombiyuutarada.
Tusaalaha u sii diyaarinta xirfada iyo waxbarashada wuxuu jiraa isagoo laba nooc ah:
Kooxda 1: Adigaaga weli ku jira barashada luqada Iswiidhishka.
Kooxda 2: Adigaaga dhameeyay Sfi D.
Yaa loogu talogalay
Koorsadan hagida waxay ku jiheysantahay adigaaga ku jira barashada luqada Iswiidhishka ee haysta waxbarasho hore oo gaaban. Waxaad dooran kartaa inaad koorsadan dhigato wakhti buuxa ama aad koorsadan ku dhex wado waxbarashada sfi-ga. Waxaa dadka lagu siiyaa taageerada luqada xilliga koorsadan laakiin waxaa lagaaga baahanyahay inaad awoodo fahamka iyo ku hadalka Iswiidhish fudud si aad uga qayb-qaadato.
Magaalooyinka iyo taarkiikhda koorsadan jirto
Koorsadan hagida waxay ku jiheysantahay adigaaga aqoon fiican u leh luqada Iswiidhishka, ugu yaraan dhameeyay Sfi D isla markaana haysta waxbarasho hore oo dheer, ugu hooseyn 9 sano oo dugsiga hoose-dhexe ah ama u dhiganta.
Sidan ayay u shaqaysaa
Hadafka koorsadan hagida waa inaad go’aansato laba xirfadood oo cayiman kuwaas oo aad doonaysid oo aad sii baraan karto ama aad awood u leedahay inaad shaqo ku raadiso si toos ah. Adigu waa inaad dhamaadka koorsadan aad samaysatay qorshe cad dhanka waxa aad samaynayso si aad u gaarto hadafkaaga, in aad shaqo ku hesho waxa aad doonaysid.
Taageero dhaqaale ayaad heli kartaa xilliga wakhtiga aad ku jirto tusaalaha u sii diyaarinta xirfada iyo waxbarashada. Anaga nagala hadal wixi adiga ku khuseeya.
Gunnada marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij
Adiga waxaa ku daboolaya caymisyada dhaawaca shakhsiyan iyo nolosha marka aad ka qayb-qaadanayso tusaalaha u sii diyaarinta xirfada iyo waxbarashada.